မေရီလန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ပြည့် ကျင်းပမည် | MoeMaKa Burmese News & Media
ရွှေဘုန်းလူ (တာရာမင်းဝေ) ၉ နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ် - သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၆ ဖိတ်ကြားလွှာ
(မိုးမခကြော်ငြာ) ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ၊ ၂၀၁၅
☆ GENERAL AUNG SAN CENTENARY ☆
☆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ်တစ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ☆
– မေရီလန်းမြို့ –
☆ ကျင်းပမည့် နေရာ ☆
Twinbrook Elementary School. 5911 Ridgway Ave,
Rockville, MD. 20851.
☆ ကျင်းပမည့်နေရက် ☆
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၄ရက် (စနေနေ့)
☆ ကျင်းပမည့်အချိန် ☆
နေ့လယ် ၁ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ အထိ
☆ ဖျော်ဖြေရေး ☆
သပြေညို ဆရာ ဆရာမ များနဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများရဲ့ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
☆ အကျွေးအမွေး ☆
ကြက်သားမုန့်ဟင်းခါးဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံပါမည်။
One Response to မေရီလန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ပြည့် ကျင်းပမည်
Mahar on February 5, 2015 at 9:05 pm
Maryland က ပြည်နယ်ပါဗျာ၊ မြို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ မိုးမခ က ကာလီဖိုးနီးယား ကမဟုတ်လား၊ ဒါလေးတော့ သိသင့်တာပေါ့၊